Ihoyili yePLA Sheet Extrusion Line Manufacturer kunye noMboneleli | INGQWELELI
Umgca weplastiki we-extrusion wephepha
Ibhodi yeplastiki extrusion umgca
Extruder & izixhobo ezincedisayo
Ngaba kufuneka ndiyomise kwangaphambili imathiriyeli ye-PET sheet extrusion line?
Indlela yokubonisa ngokucacileyo iimfuno zakho?
Ngaba i-extruder yeplastiki iphatha nayiphi na imathiriyeli?
Kutheni kukho ibala elimnyama kumphezulu weshiti elikhanyayo?
Kutheni umthamo womatshini wahluke kangaka?
I-PLA Sheet Extrusion Line
Umgca we-CHAMPION MACHINERY uphawu lwe-PLA sheet extrusion ngokukhethekileyo yi-R&D kwaye yenziwe ukuqinisekisa ukungafihli okuphakamileyo kunye nokuqina kwemveliso yephepha lePLA.
Imveliso yokwenyani ethembisayo nenengeniso kushishino lokupakisha lwanamhlanje. Uyilo olukhethekileyo lwe-extruder lwenza ukuba izixhobo zithathele ingqalelo izinto ezimbini ezahlukeneyo ze-PLA ezixhathisa ubushushu kunye ne-PLA ephantsi yokumelana nobushushu ngaxeshanye.
Umatshini we-PLA we-extrusion sheet unokuvelisa i-PET sheet. Ingasetyenziswa njengePET sheet extrusion line.
I-twin screw extruder
I-PLA eyonakeleyo, I-PET
Ishiti elinye lomaleko, Iphepha elinezintlu ezininzi
Inkqubo ye-PLA Extruder-extrusion
Ubume be-screw, i-permutation kunye nendibaniselwano ye-screw elements, zonke ziyilwe ngu-CHAMPION MACHINERY. Ngobunzima obuphezulu, ukumelana nokunxiba okuphezulu.
Ifanelekile kwi-PLA yezinto ezinyulu kunye nokuxuba izinto ezinyulu kunye nezinto ezihlaziyiweyo. Special parallel twin screw for PLA kwenza dispersibility izinto ezahlukeneyo kwi extruder.
Iyunithi yekristali kunye ne-dehumidifier yasimahla, akukho preheating imathiriyeli.
Inkqubo yokukhupha umoya =ukukhutshwa kwegesi yendalo + ukukhupha umoya ngevacuum
Le nkqubo yokucoca ayigcini nje ukukhupha umswakama wezinto eziphathekayo kwi-extruder, kodwa iphinde ikhuphe ukungcola kwi-extruder. Akukho mabala kumphezulu weshiti.
Inkqubo yokuzinzisa uxinzelelo
Ukusuka kwi-extruder ukuya kwi-T-Die, ukujonga uxinzelelo olupheleleyo.
Ngaphambi kwempompo enyibilikayo kwaye emva kwempompo enyibilikayo, ixhotyiswe ngenzwa yoxinzelelo. Olu lawulo luvaliweyo luvumela i-extruder ukuba ilungelelanise ngokuzenzekelayo.
Iindidi ezimbini ezahlukeneyo zenkqubo yokujija: i-winder yomsebenzi wezandla, i-winder ezenzekelayo.
I-auto winder, ixhotyiswe nge-SIEMENS servo system yokulawula iimoto. Ichaneke ngakumbi kwaye inomsebenzi wongqamaniso lwesantya kunye nomgca wonke, okwenza ukujija kube lula ngakumbi, kulula kwaye kukhuselekile.
Ukuxhobisa ngophando oluzimeleyo kunye nokuphuhlisa i-auto winder, isantya somgca we-PLA sheet extruder machine sinokukhawuleza.
Imveliso yephepha le-PLA ingasetyenziswa kwisitya semifuno, isikhongozeli seziqhamo, iipakethi zempahla yabathengi, njalo njalo.
I-SIEMENS S7-1500 inkqubo yokulawula.
SIEMENS ulawulo lwe-servo kunye nolawulo lwe-inverter.
Umsebenzi weSitshixo sokukhawulezisa wenza isantya somgca weshiti sibe lula.
Inye kuphela iphaneli yokusebenza kwesikrini, esebenza ngokulula.
Ukupakishwa kunye nokuThunyelwa
I-PLA (i-polylactic acid) yimathiriyeli enokuhlaziywa yi-biodegradable. Eyenziwe ngestatshi ekrwada izinto ezitsalwa yimithombo yezityalo ezivuselelekayo (ezifana nombona, icassava, njl.), kwaye inkqubo yokuvelisa ayingcoliseki.
2.Indlela yokufumana ikowuteshini ye-PLA sheet extrusion machine?
Nceda uqhagamshelane nomphathi wentengiso ye-CHAMPION kwaye uxelele iiparamitha zemveliso yephepha lakho, njengobubanzi, ubukhulu, umthamo kunye nezinye iimfuno ezikhethekileyo.
3.Lithini ixesha lokuhambisa?
Malunga neenyanga ezi-4, ixesha elineenkcukacha nceda ubuze umntu ongu-CHAMPION.
Ngaphambili: PP / PS Sheet Extrusion Line
Okulandelayo: I-PET sheet extrusion line yetreyi yembewu yezolimo
Umatshini Wokukhupha iPhetshana leSilwanyane
Umgca weMveliso yePet Sheet
Iphepha leSilwanyane seThermoforming
Umatshini wePhepha le-Pet Thermoforming
PP / PS Sheet Extrusion Line
I-PP/PE/PS/EVA/EVOH Icwecwe lesithintelo somaleko oluninzi Ext...
PC Sheet/Roofing sheet Extrusion Line
I-PVC Edge Banding Sheet Extrusion Line
Ngayo nayiphi na imibuzo engaphezulu, ungaqhagamshelana neqela lethu lezentengiso nge-imeyile, i-WhatsApp okanye iLinkedin. Siza kukunceda ufumane imveliso efanelekileyo kwisicelo sakho.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi......Bona Okuninzi
UMnu. Youming He
UNksz Sarah Xue